Rasaasa News – Halganka Somalida Ogadeeniya oo Gacanta u Galay Eritariya
on April 14, 2009 10:40 pm
Waxaa baryahan dambe soo baxaya isku dayo jaha wareer ah oo ay ku kacayaan kooxda loo yaqaan Jwxo-shiiladu. Waxay in badan shacabka Somalida Ogadeeniya isweydiinayaan waa maxay danta Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil] ugu jirta in uu shacabka Somalida Ogadeeniya coloobo, Dagaalka uu ku qaadayo koonfurta Somaliya, in uu la dagaalamo ururada la dagaalama Itobiya iyo waliba in uu laayo halgamoyaalka ku magaxbixiyey halganka Somalida Ogadeeniya?
“Hashu maan kaygii gadaye ma masaar bay liqday”, Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya oo ay taageeradeedda u wayn ka iman jirtay shacabka Somalida Ogadeeniya ayaa waxay hada u muuqataa mid lumisay taageeradii shacabka marka laga reebo dad la socday wax ka dhex socda Jwxo oo taageero xoog leh u haya Golaha sare Jwxo.
Maxamed Cumar Cismaan oo ay shacabka Somalida Ogadeeniya hada ugu yeedhaan Jwxo-shiil ayaa magacan waxaa loo bixiyey 6 sano ka hor kolkii la arkay sida uu wax u wado.
Jwxo-shiil oo ay Somalida Ogadeeniya taariikhdiisa aad uga dharagsan tahay ayaa si nasiib daro ah ku noqday xoghayaha Jwxo isaga oo badalay halgame Sheekh Ibraahin Cabdala oo ay taariikhdiisa aad u taqaano Somalida Ogadeeniya.
Jwxo-shiil kolkii uu noqday Xoghaya Jwxo, waxaa kolkaas jirtay dabayl siyaasadeed oo saddex geesood leh;
1. Dagaalkii Eritariya iyo Itobiya
2. Dawlad Dimoqdaatiya U samayntii Somaliya
3. Shacabka Somalida Ogadeeniya oo si xoog leh u soo galay dalalka reer Galbeedka.
Qodobka kowaad, waxaa ay Eritariya raad raadisa urur mucaarad ah oo ay ku hubayso xukuumada kaligii taliye Malise waxayna soo heshay Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo]. Kaliya Eritariya ma ayna raadinaynin urur mucaarad ah ee waxay doonaysay urur ay siyaasadiisa iyadu hagto. Arintaas waxay heshiis qarsoodi ah kala gashay Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil] oo heshiiskii ay wada galeen uu yahay midhaha maanta ee ururka Jwxo.
Qodobka labaad, Somaliya Xiligii uu Maxamed Cumar Jwxo-shiil noqday Xoghaya Jabhada waxaa ka socday isbedel dimoqraatiyada oo ku salaysan nidaam beeleed oo wax lagu qaybsanayo. Waxaana soo baxday in beesha Ogadeen oo ay dadku u dhigaan qabiil marka beelaha Somaleed ee jooga Somaliya wax loo qaybinayo ahana beel wayn ayaa waxaa lagu qiimeeyey in ay Somaliya ka tahay beel yar. Arintaasi waxay ka cadhaysiisay dadka ka soo jeeda beeshaas oo taageero xoogleh siiyey ururka Jwxo iyaga oo wax ka badalayay xeerarka ururka oo ah in uu u dagaalamo xoriyada dadka Somalida ah ee degan Ogadeeniya. Arintan waxaa si beel ah u hirgaliyey Jwxo-shiil oo isagu lahaa dan gaar oo aan wadni danta jwxo.
Qodobka saddexaad, dadweyne badan oo ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya oo iyaga laftigoodu ka xun isbedelka beeleed ee ka hirgalay Somaliya ayaa waxay diyaar u noqdeen in ay qaaraanka ku bixiyaan si beelnimo. Jwxo-shiil waxaa uu shaqaaleeyey dad aad u badan oo ka soo jeeda beeshiisa meeshii uu ku shaqaalayn lahaa yaa halganka wax u taraya ayuu qaatay yaa adiga si qabiil ah kugu difaaci.
*Eritariya waxaa ay ahayd ururkii ugu horeeyey ee kula dagaalama gudaha Ogadeeniya Jwxo sanadkii 1991. Waxay si xoogleh uga horjeeday dhaqdhaqaaq ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya aqoonsigii ciidamadii laga dilay Ogadeeniya wali waxaa laga heli karaa xafiisyada [archive] Jwxo.
Eritariya waxay u fidisay Jwxo kaalmo xoog leh waxay siisay xarumo tabobar oo ciidan, xafiisyo iyo waliba xarunta Jwxo. Madaxda ururka Jwxo kama warhayn walina kama war hayaan heshiiska u dhaxeeya Jwxo-shiil iyo Eritariya. Anigu shakhsiyan waxaan isleeyahay Eritariya waxay Jwxo u taagan tahay halkii uu u taagnaa M/w Somaliya Maxamed Siyaad Bare Jabjhadii G/S.
Eritariya waxay gaadhsiisay ururka Jwxo in uu isu badalo diktator oo laga leexdo xeerarkii Jabhada, waxaa kale oo jirta dilal qarsoodi ah oo loogaysto N/hurayaalka. Waxaan dhag loo dhigayn dhawaaqyada ka soo baxa waxgaradka Somalida Ogadeeniya, Waxaay soo kala dhexgashay qabyaalada iyo isnac bulshada dhaxdeeda ah.
Dadaka Maxad gaabnida ah ee taageera Jwxo garabka Jwxo-shiil uma muuqdaan waxaas oo dhan balse waxaa uun u muuqda Boggag Internetk, Maryaha ganacsiga loo sameeyey, Ideecada ay Eritariya kula dagaalanto Itobiya ee ay ugu magac dartay Ideecada Somaliweyn iwm.
Hadaan dib, ugu noqdo su,aalihii kore, dhibaatada haysata shacabka Somalida Ogadeeniya inta uu gaysto jwxo-shiil iyo inta uu gaysto gumaysigu waxaan odhan karaa waxaa badan inta uu gaysto Jwxo-shiil. Sababtu waxaa weeye gumaysiga waxaa ula dagaalanaa in uu yahay cadow maxaynu u aqoonsanaa ninka xabada ka difaaca Itobiya kaasi waa cadowga Somalida Ogadeeniya wuxuu dilay N/hurayaalka Somali Galbeed. Cadowgu hadii uu dilo N/hurayaalka Jwxo waa wax naga dhexeeya Jwxo-shiil wuxuu hadh iyo habeen dilaa N/Hurayaalka Jwxo hadaba maxaynu ku xisaabnaa.
Waxaan Jeclaan lahaa in bal wax garadka Somalida Ogadeeniya ay isweydiiyaan, hadii aynu inagu wadno halganka ay Jwxo wado maxaynu u awoodi waynay in aynu saxno khaladkeeda. Waxaa dhab ah in Jwxo iyada laftigeedu ayna wax isu sheegi karin dadweynaha Somalida Ogadeeniyana ayna waxba u sheegi karin, marka aan lee yahay jwxo waxaan ula jeedaa garabka Maxamed Cumar Cismaan.
Garabka uu hogaamiyo Eng Saalax Xaaji Cabdiraxmaan Macow oo in badan ka soo horjeeday garabka Maxamed Cumar Cismaan ayey guud ahaan ummada Somaliyeed gaar ahaana ummada Somalida Ogadeeniya u haysataa in ay tahay Jwxo dhab ah oo ka turjumaysa rabitaanka ummada Somalida Ogadeeniya.